Gaaffii jijjirraa Nyaataa Yunivarsitii Jimmaa
Roobii, Guraandhalaa 10, 2016 Local time: 01:29
WASHINGTON DC— Muddee 3 bara 2012 mooraa yunivarsitii Jimmaa keessatti baratonni soommana baatii ayyaana Gannii sababaa gochuun nyaatii dur dhiyaataa ture akka jijjiramuuf gaaffii dhiyessanii jiru.
Hordoftoonni amantii Ortodoksii kun dhiyessiin Daabboo kan duraan kilo graama 100 ture booda gara kilo graama 50tti gad buufame iddoo duriitti nuuf ha deebi’u jedhu.
Yunivarsitiin Jimmaa garuu baratonni amantii adda addaa hordofan akkaataa soommana garaa garaa waan qabaniif sana hordofnnee nyaata dhiyessuuf rakkisaa ta’uu dubbatu.
Baratonni nyaata dhiyaatuuf kana mooraan ala geessuu fedhan akka jiranis ibsamee jira.
Walitti bu’iinsa uumameen barattonni mada’an akka jiran kan ibsamee ta’uus bulchiinsii mooraa yunivarsitii jimmaa garuu gabaasaan akkasii nu dhaqqabe hin jiru jedha. Yeroo ammaa baruumsi itti fufuu isaas ibsee jira.
Most ViewedHiriira Jalduu fi Bulee Horaa, Deebii Angawaa Gujii“Mootumman Itoophiiya Tarkkanfii Oromiyaa Kessatti Fudhate Dogoggora Ta’u Amanee jira,” Ministirii Dhimma-alaa Yunaaytid Isteetsitti Itti Aantuu Ministeera Dhimmoota Afrikaa.KFO: Ajjeechaa Oromiyaa Keessatti Geggeessame Ka Qoratu Qaamni Walabni Hundeessamuu QabaAngawoonni magaalaa Adaree fi kan Bulee Horaa maal jedhu? Walisoon maal keessa turte?Hiriirawwan Har’aa Oromiyaa Keessaa fi Tarkaanfii Humnoonni Mootummaa Fudhatan, JedhameMost Listened Gabaasaa guutuu dhaggeeffadhaa Gabaasa guutuu armaan gaditti dhaggeeffadhaa Guutummaa gabaasaa kanaa dhaggeeffadhaa Gabaasni sagalee kunooti Guutummaa qophii keenyaa dhaggeeffadhaa